Idizayini & Oda Ubucwebe Obenziwe Ngekhwalithi Ephakeme Bokwakha | Popular Jewelry
Ukuguqula imibono ibe yiqiniso kusukela ngo-1988
Ngaphezulu kweminyaka engu-28 yobuchwepheshe embonini, inkampani yethu iklame izingcezu eziningi zekhwalithi eyingqayizivele yamakhasimende ethu. At Popular Jewelry, siyaziqhenya ngemiklamo yethu futhi sikholelwa ukuthi indlela ethathwe ukuqeda isiqeshana ngasinye ibaluleke ngendlela efanayo nobucwebecwebe uqobo. Kusukela lapho siphonsa insimbi encibilikisiwe, kuze kube manje sifaka imali eqediwe kulolo lucezu-ayisekho umzuzwana wokuqina wobuciko. Ithimba lethu lochwepheshe lizosebenzisana nawe ngokucophelela ukuklama ubucwebe obukade ubuphupha. Ukusuka kuma-nameplates, kusuka kumabhande amabhande, kuya kumlomo wegolide nedayimane- sizodlulisa imibono yakho ibe yinsimbi eyigugu- sicabange njengokuthintelwa kweNkosi yethu iMidas.
Yakha futhi udale ubucwebe bakho
Ngokuvamile, sincoma ukuthi ubheke le mibuzo eyisisekelo elandelayo:
1. Yiluphi uhlobo lwensimbi eyigugu onentshisekelo yokuthi ucezu lwenziwe kulo?
Isibonelo: (IPlatinamu, Igolide [24K, 22K, 18K, 14K, 10K], Isiliva)
2. Imuphi umbala?
Isibonelo: (I-Yellow Gold, i-Rose Gold, i-White Gold, emnyama, njll)
(Konke / izingxenye ezithile)
3. Uhlobo lokuthungwa (s) noma ipolishi / ukuqeda (ongathanda ukukwenza) kucezu lwakho:
Isibonelo: Finish Finish, Satin Finish, Briped Finish, Hammered Finish, Wire Brushed, Sandblasted Finish, njll.
4. Ubukhulu (bungalinganiselwa) bcezu
Isibonelo: (Ubude x Ububanzi x Ukujula) kwamamilimitha noma amayintshi
5. Amatshe ayigugu
• Hlobo luni lwamatshe ayigugu?
• Likhulu kangakanani igugu ngalinye?
• Ungathanda ukuba bahlale kuphi?
• Isiphi isitayela sokubhala?
Isibonelo: Vimba Incwadi / Iskripthi
• Kufanele yini?
Isibonelo: Izinsuku, Izinhlamvu zokuqala, amagama, Izilinganiso, njll. (Sicela wazi ngesikhala esitholakalayo esivunyelwe ngosayizi wobucwebecwebe oyi-oda)
Ama-grill enziwe ngokwezifiso enza inkambiso njengoba izingcezu zokwenza ngokwezifiso zithola (inhlanhla yokuthola umuntu onamazinyo afanayo!) Ukuthola ulwazi olwengeziwe mayelana nokwenza amazinyo egolide wangokwezifiso (ama-grill) enziwe, ungavakashela ikhasi lethu elizinikezele.
Ukuze sikwazi ukukusiza ngokuqhubekayo, siphakamisa kakhulu ukuza endaweni yethu eChinatown ye-NYC. Letha nomqondo wakho (noma) noma yimaphi amamodeli afanele, izithombe noma imidwebo yalokho. Ngaphezu kwalokho, ungashayela (212) 941-7942 noma usithumele ie-mail info@popular.jew jewelry ukuhambisa umbuzo noma ukucela isilinganiso. Silangazelela ukudala okuthile okukhethekile nawe.